Baro habka raaxada naasaha dumarka ay ugu jecelyihin
Waa sidee raaxada naasaha dumarka? Haddii aad raacdo tilmaamahaan waxaad kaga keeni kartaa si dhaqso ah riin.
Naasaha dumarka ayaa u baahan in loo taabto si dareen leh oo dabacsanaan ku dheehan tahay. Hadaba naasaha raaxada leh iyo sida ay kala yihiin.
Nuucyada Raaxada naasaha dumarka
Raaxada naasaha waaweyn
Raaxada naasaha yar yar
Raaxada naasaha dumarka ay ugu jecelyihin
Marka laga hadlo raaxada naasaha dumarka ayaa ku kala duwan waxyaabo badan. Waxaa jiro dumar fara badan oo dareen saaid ah ka helo laakin waa haddii aad barato ciyaarta hore, macnaha ka hor inta aadan taabanin taabashada naaska.
Raaxada naaska dumarka kuma xirno in ay naaso waaweyn oo macaan leeyihiin ee waxa ay ku xiran tahay hadba sida ay dareenkeedu yahay iyo sida dabacsan ee aad u taabato.
Raga ayaa ku kala duwan ka helitaanka naasaha dumarka, waxaa jiro rag ka helo naasaha waaweyn halka kuwa qaar ay jecelyihiin kuwa yar yar ee ibta dheer leh, sidoo kale waxaa jiro naaso dhex dhexaad ah oo aan weyneyn, aadna u yareyn.
Naaska waxaa lagu tiriyaa ama lagu tilmaamaa xubinta jirka dumarka ugu muhiimsan. Haddeysan dumarku naaso lahayn ma dareemi lahayn naagnimo, iyo hooyonimo.
Naasaha dumarka kaliya kama helaan raaxo ee waxa ay u tahay xubin muhiimad gaar ah u leh. Haddii ay caruur dhasho waa halka ubadkeeda ay ka naas nuujin lahayd.
Maxay ku kala duwan yihiin dumarka raaxada naasaha?
Dumarka qaar markii naaska laga taabto ama carabka laga mariyo waxay dareeemaan raaxo xoog leh, xitaa ku dhawaadaan in ay biyo baxaaan.
Halka dumarka kale ay xoogaa yar istiin ah dareemaan balse aanan gaarsiisneyn gariirka kuwa kale.
Waxa ay ku xiran tahay hadba sida ninkeeda uu u yaqaano raaxadeeda. Raga qaar waa kuwo yaqaano halka laga bilaabo raaxada xaaskooda halka kuwa qaaar aysan aqoonin oo ay toos u aadaan naaska ama xubinta taranka (Siilka)
Ogow sida raaxada raga ay u jecelyihiin ayeey dumarkuna u jecelyihiin nin ugu raaxeeyo bilaa hagar.
Waxa ay jecelyihiin raga in lagu yiraahdo raaxada ka hor erayada raga ay jecelyihiin, sidaas si lamid ah ayeey dumarkuna u jecelyihiin in lagu dhaho erayo dareenkooda kicinayo.
Sida loo kiciyo dareenka dumarka ma ahan wax adag, kaliya waxaad u baahan tahay fahanka raaxada dumarka.
Maxaa lagu yaqaanaa ninka aanan caadiga ahayn?
Jawaabta: Dabcan horay kama aado naaska iyo xubinta taranka ee waxa uu fiiriyaa, ishana ku hayaa halka ugu muhiimsan ee kacsigeeda ka bilaaawdo.